Zivisa mafoni kana maitiro ekuita yako iPhone kukuudza uyo ari kukusheedza | IPhone nhau
Kunyangwe isu tave neIOS 10 zviri pamutemo pamashandisirwo edu kweanopfuura vhiki mbiri, isu tinoramba tichitsvaga zvinhu zvitsva zvakaverengerwa mune yazvino mashandiro esisitimu pane block. Nhasi tinoda kukuzivisa iwe ku «Zivisa mafoni», chiitiko icho isu Ichabvumira iyo iPhone kukuudza iwe nezwi ndiani ari kukushevedza.
Kuzivisa mafoni kunotibvumidza kubvisa ruzha rwemafoni edu uye nekutsiviwa nezwi raSiri kukuudza kuti ndiani arikufona. Izvi zvinogona kubatsira zvakanyanya kunyanya patinotyaira, kubvira inotibvumira kuti tizive kuti ndiani ari kutisheedza pasina kutarisa nharembozha uye nekudaro kukwanisa kusarudza kuti wotora foni here kana kusazvinetseka nezvayo (zvese izvi zvakabatana neyakagadzirwa bhurumu system, isu hatisi kuraira kutora nhare uchityaira). Naizvozvo, isu tinokuudza iwe kuti ungazvishandise sei.
Ngatitangei nekuenda kunyorera Zvirongwa, kwatichaenda kuchikamu Telephone zvinova zvisizvo muhurongwa hwekushandisa.
Kana tangopinda mukati, tichaona pasi pe "CHIDZIDZO" chikamu sarudzo Zivisa mafoni, iyo nekutadza yakaremara ("Never")
Iye zvino, mukati meZivisa mafoni isu tine zvakawanda zvingasarudzwa:
Nguva dzose: Saka tichava, sekureva kwayo zita, sarudzo iyi inogara ichiitwa uye ichagara ichizivisa zita remunhu ari kufona kana, zvichikundikana iyo, nhamba.
Mahedhifoni & Mota: Nokusarudza iyi sarudzo, ivo vanozoziviswa chete kana iyo iPhone yakabatana nehedhifoni (ingave bluetooth kana wired) kana bluetooth system mumota.
Nhare chete: Anozvitsanangura chaizvo. Ivo vanozoziviswa chete kana iwe uri kushandisa mahedhifoni.
Zvino iwe unongofanirwa kusarudza sarudzo inokodzera zvakanyanya zvaunoda / zvido uye iOS 10 inozotarisira kukuudza iwe kuti ndiani ari kukushevedza pasina kumbotarisa nhare yako kuti uzive kuti ndiani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Zivisa mafoni kana maitiro ekuita yako iPhone kukuudza kuti ndiani ari kukushevedza
Ndatenda, ruzivo runonakidza.
Ini ndine iOS10 asi iyo sarudzo haiwanike, imwe nzira ??
Pindura kuna Maly
alex vincent akadaro
Izvo zvinoenderana neiyo iPhone modhi iwe yauinayo zvakare. Asi ini handizive kuti ndeipi modhi iyo sarudzo inogona kuwanikwa.
Pindura kuna Alex Vicente
Roberto Fernandez akadaro
Ndine iPhone 6 uye iyi sarudzo inouya neIOs 10; dambudziko nderekuti harindishande kunze kwekunge ndaisa sarudzo "nguva dzose", ndikaisa "mahedhifoni chete" kana "mota nemahedhifoni" hazvishande.
Chero ani zvake anonzwa zvakafanana?
Pindura kuna Roberto Fernández
Roberto Fernandez (@Robertfega) akadaro
Zvakanaka, ndine iPhone 6 uye pandakagadzirisa kuIs10 ndikaona iyi sarudzo handina kuzeza kutanga kuishandisa, sezvo ini ndichigara ndichiteerera mumhanzi kana podcast uye zvaishungurudza kutora nhare yangu nguva dzese munhu paanokudana uye ona kuti ndiani.
Asi ini ndine dambudziko, rinongoshanda kwandiri pandinosarudza iyo "Nguva dzose" sarudzo; ndikasarudza "mahedhifoni chete" kana "mota nemahedhifoni" hazvishande kwandiri.
Pindura kuna Roberto Fernández (@Robertfega)
Javier V. akadaro
Ndine 6s Plus uye chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri saRoberto Fernandez, zvinongoshanda muZvese, kana mumahedhifoni kana neBluetooth.
Pindura kuna Javi V.
Javi (@nonchevou) akadaro
Ndine 6s Plus uye zvimwechetezvo zvinoitika kwandiri, zvinongoparidza muna Nguva dzose, hapana bluetooth mumotokari kana nemahedhifoni akabatana.
Pindura kuna Javi.V (@nonchevou)
Iban Keko akadaro
Izvi zvaive zvatoitwa neNokia 10 kana makore apfuura
Pindura kuna Ibán Keko
Ndine iPhone 6 ine iOS 10, ini ndakangosarudza iyo sarudzo "Mahedhifoni nemota" uye nemahedhifoni anoshanda nemazvo. Iyo ringtone inorira uye yechipiri inoverenga zita rauinaro pane ako ajenda.
Wakatarisa here huwandu hwemahedhifoni?
Sarudzo inonakidza, kunyanya kana iwe uchityaira, kunyangwe zvichizowana anopfuura mumwe kana mumwe mudambudziko foni ikati ex kana mumwe munhu asingafanire kunge achiteerera mumwe munhu ari kufona.
Ndakaedza "mahedhifoni chete" uye hazvishande kwandiri kana (iPhone 6S).
Tichafanirwa kuyedza neIOS 10.0.2.
Pindura kuna Akr
Kwayedzwa nezuro ne iPhone yakabatana nemota kuburikidza neBluetooth uye yakandishandirawo (iPhone 6, iOS 10.0.2)
Kana yakabatana mumota, Siri anokuudza here kuti ndiani ari kukushevedza? Uye kana iri nhamba isingazivikanwe?
Iyo Google Pixel Launcher inoyeuchidza zvikuru Apple's 3D Kubata